War deg deg ah: Xukuumada Soomaaliya oo wufufud u direyso Balad xaawo kadib dagaaladi shalay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka War deg deg ah: Xukuumada Soomaaliya oo wufufud u direyso Balad xaawo...
War deg deg ah: Xukuumada Soomaaliya oo wufufud u direyso Balad xaawo kadib dagaaladi shalay
Xukuumada Soomaaliya ayaa wafdi deg deg ah u direysa degmada Beledxaawo ee Gobolka Gedo, halkaasoo shalay dagaalo dad badan ku dhinteen uu ka dhacay, kadib markii ciidamo ka wada tirsan dowladda uu dagaal ku dhex maray.
Shir deg deg ah oo Golaha Wasiirada ay ku yeesheen magaalada Muqdisho, isla markaana uu shir gudoominayay Ra’iisul Wasaaraha ayaa lagu go’aamiyay in wafdi loo diro, kaas oon kala dhex gali doona dhinacyada isku haya magaalada Balad xaawo.
Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya, Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa waxa uu nasiib daro ku tilmaamay dagaalka, isagoo ugu baaqay labada dhinac ee dagaalamaya inay xabada joojiyaan sida uu ugu dhaqsaha badan iyo shuruud la’aan sida uu yiri.
“Aad ayaa uga xunahay dagaalka, Wasaarada Gaashaandhiga wax badan ayay kala socotaa, wax lagu tala galay ma aheyn, waxaa jooga Beledxaawo ciidankii sanad ka hor xoreeyay degmadaas, Garbahaarey iyo ciidankii dhowaan qabtay Buurdhuubo”ayuu yiri Maxamed Sheekh Wasiirka Gaashaandhiga.
Wasiirka ayaa sheegay in saacadaha soo socda wafdi loo dirayo, si ay u kala dhex galaan labada dhinac ee dagaalamay, isla markaana dib loogu soo celiyo magaalada nabadgelyadii iyo xasiloonidii ka jirtay, dagaalka intuusan bilaaban a hor, waxaana uu uga digay dhinacyada dagaalamaya inay sii wadaa dagaalada.
Goor dhow wafdi ka socda Xukuumada ayaa tagi doona, maamulka ayay la hadli dooaan, xiisada ayay xalinayaan, waxaa anaga diidanahay in shacabka dhibaato soo gaarto, dadkii shalay laga xoreeyay Shabaab in maanta xabad kale ku dhintaan waa dhib”ayuu yiri Wasiirka Gaashaandhiga.
Mar uu ka hadlay ciidanka dagaalamaya ayuu sheegay in ciidan ka tirsan xooga dalka aanay dagaalka ku lug laheyn, isagoo xusay in maamulka deegaanka ka taliya ay heystaan ciidamo, balse ciidanka ugu badan ee milateriga ay ku sugan yihiin Garbahaarey iyo Buurdhuubo sida uu yiri.
Dagaalada ka dhacay Beledxaawo oo ay ku dhinteen dad ku dhow toban ruux ayaa salka ku haya gacan ku heynta degmada, iyadoo Ciidamo uu wato Gudoomiyaha Doolow lagu eedeeyay inuu damacsan yahay in degmada Beledxaawo u gacan geliyo Maamulka KMG ah ee Jubba oo uu ka tirsan yahay.
Previous articleDAAWO:-Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud.
Next articleku dhawaad 12 qof ayaa ku dhimatay laba Qarax oo ka dhacay Suuqa Gikomba ee magaalada Nairobi Kenya